आखिर किन बाथरूममा नै सबैभन्दा धेरै हुन्छ हर्टअट्याक? जानिराखौ! » बुद्ध भूमि नेपाल
मानिसको लागि अहिले हर्टअट्याक (प्राणघातक रोग) गम्भीर समस्या बनेको छ। हर्टअट्याक अचानक हुन्छ तर यो खराब लाइफ स्टाइल र खानपानको कारण हुन्छ। हर्टअट्याक आउनुको कुनै निर्धारित समय हुदैन। तर के तपाईलाई थाहा छ हर्टअट्याक बिहानको समयमा बाथरुममा धेरै हुन्छ। बाथरूममा हर्टअट्याक हुनुको धेरै कारण रहेको छ, यदि तपाईले यस बारेमा जानकारी पाउनुभयो भने आफु र आफ्नो परिवारलाई यसबाट सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। बिहानको समयमा बाथरूममा हर्टअट्याक किन आउँछ? र हर्टअट्याक के हो ?***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
विज्ञानको आधारमा हेर्दा हर्टअट्याकको सम्बन्ध हाम्रो रगतमा हुन्छ। रगत मार्फत हाम्रो शरीरमा अक्सीजन र जरूरी पोषक तत्व पुग्छ। तर जब तपाईको हृदयसम्म अक्सीजन पुग्ने धमनिमा प्लाक जमेको कारण रुकावट पैदा हुन्छ, यस कारण मुटु धड्किने रफ्तार असन्तुलित हुन्छ। र यसबाट नै हामीलाई हर्टअट्याक आउने गर्छ।
बाथरूममा हर्टअट्याक आउनुको पहिलो कारण: बिहानको समयमा जब हामी शौचालय जान्छौ तब हामी पेट पुरै तरिकाले सफा राख्नको लागि प्रेशर लगाउछौ। अधिक प्रेशर लगाउदा हाम्रो मुटुमा अधिक दवाब बन्छ। यसकारण हर्टअट्याक आउन सक्छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****